Kedu otu esi emepụta ahịa ngwaahịa na Amazon?
Amazon bụ ụlọ ọrụ ntanetị kachasị elu n'ụwa kachasị ebe ọtụtụ nde ndị ọrụ si n'akụkụ ụwa nile na-egbo mkpa ha. Amazon na-enyere ndị ahịa aka inweta ego n'efu. N'ebe a ịkwesighi ịmepụta weebụsaịtị ma ọ bụ tinye ego na njikarịcha gị. Ihe niile ị chọrọ bụ ịnye ndị ahịa gị ngwaahịa dị mma na nkwado ahịa zuru oke. Naanị ihe ị ga-achọ ịtụle bụ njirimara njirimara nke ngwaahịa Amazon gị. Amazon nwere ike ime ka ụmụ ahụhụ na-ebute gị na ndepụta gị ma ọ bụrụ na e mere ya dị ka ihe Amazon chọrọ ma nyere ndị ọrụ aka ịme mkpebi ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị okporo ụzọ ndị a gbanwere na ntinye aha Amazon gị, ị ga-eburu otu isi iwu - ịchọta nkọwa gbasara ngwaahịa gị ị na-enye, nke ka elu ị ga-agbadoo na Amazon SERP. Ụzọ Amazon dị iche na Google okporo ụzọ. Ndị ọrụ na-achọ ngwaahịa ụfọdụ na Amazon nwere ezi uche ịzụrụ ihe. Ha adịghị eme nchọpụta maka Amazon iji nweta ihe ọmụma. A na-atụle ọnụ ọgụgụ dị mma na ntọala Amazon na Amazon ngwaahịa na 15%. Ọ bụ okpukpu atọ karịa nke usoro ntanetị ndị ọzọ. Enwere ike ịkọwa ya site n'ịzụta uche nke ọchụchọ Amazon.
Otú ọ dị, ugbu a, ọ gaghị ezu iji guzobe azụmahịa gị na Amazon. Iji mee ọtụtụ n'ime okporo ụzọ, ịkwesiri ijide n'aka na ndepụta ngwaahịa gị kachasị mma yana mgbasa ozi ahịa gị na-arụ ọrụ gị. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe ndị kachasị dị egwu nke na-eme ka mgbanwe dịkwuo na ndepụta Amazon gị.
Ndepụta aha dị ka otu n'ime isi ihe na-emetụta ndị ikpe na-ekpe ikpe
Mgbe ị na-edepụta ndepụta Amazon gị, ịkwesịrị itinye nlezianya pụrụ iche na utu aha gị ọ bụ ihe mbụ onye ọrụ nwere ike ịhụ na-eduzi ngwaahịa nyocha na Amazon. N'ikwu okwu n'ozuzu, aha ahụ na-agwa ndị mmadụ ihe ngwaahịa gị dị.
Ọ bụrụ na ị chọpụtala ihe ndị Amazon na-ewu ewu n'oge gara aga, ị ga-achọpụta na ọtụtụ n'ime ha nwere nchịkọta ogologo na nkọwa nke nwere ihe ọ bụla dị mkpa na ngwaahịa..I nwere ihe odide 250 iji tụba ụfọdụ ozi dị oke mkpa banyere ngwaahịa gị na isiokwu ịchọrọ. Ihe ndị dị mkpa na-agụrịrị na aha gị bụ aha aha, aha ngwaahịa n'onwe ya, na ihe ọ bụla dị iche iche dị ka agba, nha ma ọ bụ ojiji.
Ọ dị oke mkpa ịghara ibubiga aha gị na isiokwu dịka ọ gaghị agafe ma ọ ga-ele anya spammy. Nhọrọ dị mma nke aha a gbanwere nke ọma bụ nke a pụrụ ịhazi, na-arụ ọrụ, aha nkọwa nke na-agwa ndị ọrụ ihe ngwaahịa gị bụ ozugbo.
Foto dịka ngwá ọrụ mmetụta uche dị na Amazon
Akụkụ ọzọ dị ịrịba ama nke ngwaahịa njirimara ngwaahịa Amazon bụ ihe oyiyi. Foto nwere ike ịkụnye ndị ahịa azụ na ndepụta gị ma ọ bụ ka ị na-agagharị. Ọtụtụ ndị na-atụ egwu na-atụ egwu ịzụta ihe n'ịntanetị ka ha na-enweghị ike ịchọpụta n'onwe ha àgwà nke ngwaahịa ha na-enye. Otú ọ dị, ịzụ ahịa n'ịntanetị na-enye ọtụtụ uru ndị ọzọ dị ka ego ịsọ mpi, ịzọpụta oge, na ịzụ ahịa ahịa. Iji nye ndị ahịa gị nwere ike ịzụ ahịa kachasị mma, ịkwesịrị ịdị elu ma rụọ ọrụ nke ọma na ngwaahịa gị. Ha ga-enwe ike ịchọta ngwaahịa ndị ị na-ere site n'akụkụ dị iche iche.
Amazon choro ịgbaso nchịkọta ihe oyiyi ngwaahịa ya nke ihe oyiyi gị kwesịrị ịgụnye naanị ngwaahịa ị na-ere, na-acha ọcha na-enweghị ihe ọ bụla agbakwunyere na ya. Ihe oyiyi kachasị mkpa ekwesịghị ịnwe ngwa ndị na-adịghị etinye na nzụta nakwa yana okwu nkwado na badges dịka "emebere na USA," na ndị ọzọ. Ọzọkwa, Amazon chọrọ ka onyinyo ahụ dịkarịa 1, pixel pixel na 1 pixel pixel iji jiri uru njirimara ha bia. Ya mere, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ịnwere ike iji mgbatụ dị elu maka agbakwunye ọnụ.
Olee otu esi eme ka ngwaahịa Amazon gị mara mma?
Ndị na-azụ ahịa ndị na-enweghị nkwenye site na aha na onyinyo gị nwere ike ịmasị ya. Ị nwere oghere ise maka ihe nkedo na Amazon ebe ịkwesịrị igosi uru na àgwà nke ngwaahịa gị. Iji mezuo ịdị irè nke bọtịnụ gị, ịnwere ike iji paragraf dị mkpirikpi abụọ na anọ ahịrịokwu..N'ebe a, ị nwere ike ịchọta nsogbu ọ bụla nwere ike ime ka mmadụ ghara ịzụta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọtala ụfọdụ mkpesa na nyocha gị, melite bọmbụ gị maka akaụntụ maka nke ahụ. Mee ka isi okwu nke atọ dị na ya kwuo ka ha na-adọta mmasị nke onye ọrụ na-enyere ha aka ịme mkpebi ha.
Ebe ọzọ ị nwere ike ịwelite ngwaahịa Amazon gị bụ nkwupụta. Ọ bụ oge ikpeazụ ị gbanwee onye nyocha na onye na-akwụ ụgwọ gị. Ngwa ndị Amazon na-eleghara nkọwa ngwaahịa anya mgbe ọ na-enye nkọwa zuru ezu banyere ngwaahịa ha na-aga ịzụta. Ọ bụ ya mere ị ga-eji jide n'aka na nkọwa ngwaahịa gị na-atọ ụtọ ịgụ, akọwa na bara uru. N'ebe a, ị nwere ike iji akara nchịkọta nke isi iji gosi okwu ma ọ bụ ahịrịokwu ụfọdụ ma mee ka nkọwa gị dị mfe ịgụ. Amazon na-enye gị aka ederede 2,000 iji mee ihe na ngwaahịa. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji ihe odide niile mee ka onye ọrụ zụta ngwaahịa gị.
Nyochaa ndị ahịa gị nwere mmetụta dị ukwuu na ọkwa ntanetị gị na kwesịrị ịbụ otu n'ime atụmatụ nche ahịa kacha elu gị. Ha na-emetụta ọnọdụ ntinye akwụkwọ gị site na ntinye ọnụ ọgụgụ kpakpando nke na-egosi n'akụkụ ngwaahịa ahụ na nsonaazụ ọchụchọ na n'elu ngwaahịa zuru ezu. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ kpakpando gị karịa karịa 4, ị nwere ohere ọ bụla ịghọ otu n'ime ngwaahịa Amazon ndị a ma ama.
A na-atụle ngalaba nyocha kachasị ewu ewu n'akụkụ aka ekpe nke Amazon ma nyefee ebe ebe nyochaa maka ngwaahịa ahụ a họpụtara "ee" dị ka ọ na-enyekarị aka. I nweghị ike ịgwa Amazon nke nyocha na-egosi na ngalaba a na nke na-abụghị. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ na 4 na-5 na-apụta na nkebi a, ọkwa ọnụahịa gị na ahịa gị ga-adị elu.
Ebe ikpeazụ ebe nyocha nwere ike imetụta ndepụta bụ "ngalaba ndị ọkachamara na-adịbeghị anya". Ngalaba a gụnyere nyocha kachasị na-adịbeghị anya ma enweghi ike emetụta ụdị nke ụdị ọ bụla. Ọ bụrụ na nyochaa ndị ahịa gị n'oge gara aga dị mma, ọchụchọ Microsoft ga-anabatacha ụdị gị dị ka onye a pụrụ ịdabere na ya ma ghọọ ndị ahịa gị.
Nke ahụ bụ ihe mere ị ga - eji mee ka ohere ịchọta ịzụ ahịa na Amazon dị elu; ọ dị gị mkpa ilebara anya nyocha gị ma gbalịa inyere ndị ahịa gị aka Source .